समाचारमा रमाउने शान्ता चौधरी… – Rapti Khabar
इतिहास सबैको हुन्छ । हो, कोहि गरिब परिवारमा जन्मियो, त कोहि सम्पन्न परिवारमा । नेपाली समाजमा आ–आफ्नै समस्या थिए । देशमा राजनीतिक समस्या मात्रै होइन, सामाजिक समस्या धेरै छन् ।
दाङको थारु बस्तीमा जन्मिएर, हुर्किएकी शान्ता चौधरीका जीवनका कथापनि बिल्कुलै फरक छन् । के शान्ता मात्रै हुन् त त्यो गाउँको, त्यो दुःखमा हुर्किएकी ? पक्कै होइनन् । उनको समाजमा उनीभन्दा कहालीलाग्दा दिनचर्या बिताउने र बिताएका नारीहरुपनि थिए र अहिलेपनि छन् ।
शान्ता आफैले फेसबुक चलाउछिन् । यो कुरामा दुईमत छैन । तर उनका समाचार बन्न लाएर पोस्ट भने आफै गर्दिननँ । उनको फेसबुक लागि प्रचारक पक्कै छ ।
अरुले नै लेखिदिने स्टाटस् अब आफै लेख्न सकुन् । अब त आफैपनि लेख्न थालिन् होला ? उनीलाई थाहा भैसक्यो, कसरी मौसम अरुसार फेसबुकमा खेतीपाती गर्ने र अनलाईहरुमा समाचार बन्छन् भनेर :
मान्छे सत्तामा पुगेपछि, आफ्नो बिगत र औकात बिर्सन्छ । हो शान्ता चौधरीपनि आजकाल त्यहीँ समूहकी एक मात्र हुन् । उनलाइ पछिल्लो चरणमा जनताभन्दा सरकारकै बेसी चाकडी गर्नुपर्छ । यो उनको रहर नभएर बाध्यतापनि होला ।
उनले जनताले गर्ने हरेक आन्दोलन सरकारी आँखाबाट हेर्दा, प्रतिपक्ष र दलालहरुकै समूहले गरेको वा प्ररिचालित गरेको देख्छिन् । पिडित नारीहरुको पक्षमा बोल्ने उनको स्वर सत्ताले बन्द गराइदिएको छ, हुनपनि राम्रो कुरापक्षमा बोल्दा आफुलाई वा आफ्नो जीवनको बाटोमा अथवा पद, प्रतिस्ठामा असर गर्छ भने नबोल्नु नै उत्तम ।
तरपनि समाचार बन्न लाएक पोस्छ र अरिङगालहरु रमाउने समाचारमा उनीपनि रमाएकै छिन् । निर्मला पन्तजस्ता चेलीहरुले के शान्ता चौधरी सचेतक बनेको पार्टीको सरकारबाट न्याय पाउदैनन् । नत शान्ताहरु सरकारलाई हत्यारा पत्ता लगाउ भन्न नै सक्छन् ? सक्छन् त केवलः कांग्रेसले सरकार असफल बनाउने काममा लाग्यो । ओली इतिहासकै राम्रा प्रधानमन्त्री ? बालुवार जग्गा खोज्ने पहिलो ओली सरकारः यस्तै–यस्तै बोली र यी बोलीबाट रमाउने शान्ता चौधरी प्रति उच्च सम्मान ।
सरकारले भारतीय बिषदीयुक्त तरकारी बन्द गनुपर्छ तपाई भन्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ त, ओलीले ने पत्ता लाए भन्नुहुन्छ । तपाई अब मन्त्री बन्नु होला, तपाई अब सभामुख बन्नु होला ? तर तपाई पिडित नारीको पक्षमा बोल्ने असर, निडर र दबिएको आवाज कहिँलै बन्नु हुन्छ ।
हुनत निर्मलाको हत्यारा पत्ता लाग्दा, बालुबाटारका दलाललाई कारबाही हुदा केहि मिल्दैन तपाईलाई ? ओलीको चाकडी गर्नुभयो भने अबस्य सरकारी गाडी र पिर्के सलामी खादै हिड्ने पदहरु पाउनु हुनेछ । तपाईलाई शुभकामना, तपाईको बाटो कतैपनि नरोकियोस् । तपाईलाई शुभ यात्रा…र तपाई बदलिएको तपाईको देशमा करौडौं जनताले तरकारीका नाममा बिष खाईरहने छन् ।
-उज्यालो टाइम्सको टिप्पनी
विदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टिन राख्ने होटलको मापदण्ड तयार, के के छन् सुविधा ?
भदौ १०, काठमाडौँ । सरकारले विदेशबाट आउने नेपालीलाई क्वारेन्टिनमा राख्न प्रयोग हुने होटलका लागि न्यूनतम मापदण्ड तयार गरेको छ। विदेशबाट उद्धार गरिएको व्यक्ति कम्तिमा पनि एक साता आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने निर्णय गरिएसंगै क्वारेन्टिन राख्ने होटलको मापदण्ड तयार गरिएको हो । मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिनका रुपमा प्रयोग हुने होटल कम्तीमा २० वटा कोठा भएको हुनुपर्नेछ। […]
Posted on October 16, 2020 Author Rapti Khabar
असोज ३०, काठमाडौँ | संयुक्त अरव ईमिरेट्स (युएई) ले नेपाल सहित बिभिन्न देशबाट भिजिट भिषामा आउनेहरुका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । नेपालसँगै भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट युएई आउनेहरुका लागि नयाँ व्यवस्था अवलम्वन गर्न आफूहरुले निर्देशन प्राप्त गरेको हवाई कम्पनीहरु तथा ट्राभल एजेण्टहरुलाई उधृत गर्दै स्थानीय सञ्चार माध्ममहरुले समाचार प्रकाशन गरेका छन् । गल्फ […]
सँगै चियापान, अनि गोली हानाहान